Reset Counter Canon IP2770 ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း !!! | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Reset Counter Canon IP2770 ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း !!!
Posted on December 10, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Canon Printer ip2770 Printer Series များ၌ စာရွက်အရေအတွက် counter ပြည့်သွားသောအခါ Resume button တွင် လိမ္မော်ရောင်မီး (၈)ကြိမ်တိတိ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ပြသနေပါလိမ့်မည်။ Print ထုတ်ကြည့် သောအခါမှာလည်း Service error 5B00 ဖြစ်နေကြောင်း ပြသနေပါလိမ့်မည်။ သတ်မှတ် ထားသော counter ပြည့်သွားပြီး Waste Ink Absorber Full ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Error တက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ သည် ။ ထိုကဲ့သို့သော Canon ip2770 model များတွင် Absorber full ဖြစ်တိုင်း ပြုလုပ်ပေးရ မည့် ဖြေရှင်း ချက်လေးတွေလည်း internet ထဲတွင် အမြဲပင် ပေါ်ထွက်လျှက်ရှိပါသည်။
(2) Download ပြုလုပ်၍ ရရှိလာသည့် “ip 2770.doc” ဟူသော file ရဲ့ အမည်ကို “ip 2770.exe” ဟု extension ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါ။
(10) အထက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်း Service Tools ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။– ရှေးဦးစွာ USB Port ကို ရရှိရန်အတွက် Reload ပေါ်တွင် click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။– ထို့နောက် စာရွက်(၂)ရွက်ကို printer တွင် ထည့်ထားပေးပါ။– Clear Ink Counter ရဲ့အောက်ဖက်ရှိ Main ပေါ်တွင် click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ (အကယ်၍ သင့် printer တွင် error 001 ဟူ၍ ပြသခဲ့ပါက Ok ကိုသာ ဆက်၍ click နှိပ်ပေးပါမည်။ )– ပြီးနောက် printer ရဲ့ POWER ကို နှိပ်၍ ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ (တစ်ခါတစ်ရံ POWER (၂)ချက်ဆင့်နှိပ်၍ ပိတ်ပေးရသည်လည်း ရှိတတ်ပါသည်။ )– ထို့နောက် POWER ပြန်ဖွင့်ပေးပါ။ ပြန်လည်၍ စမ်းသပ်ချက်များအရ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါသည်။
post by မြန်မာ IT လူငယ်များ
This entry was posted in Printer နဲ့ပတ်သက်သမျှ. Bookmark the permalink.
← ✔ Mobile Guide Journal issue 132✔	WinRAR 5.01 (32bit , 64bit )full version →